चीनको वुहानबाट फेरि आयो संसारकै चिन्ता बढाउने समाचार : ४ प्रतिशतमामात्रै कोरोनाको एन्टिबडी ! - गोकर्णेश्वर खबर
आज: १२ मंसिर २०७७, शुक्रबार | Fri, 27, Nov, 2020
चीनको वुहानबाट फेरि आयो संसारकै चिन्ता बढाउने समाचार : ४ प्रतिशतमामात्रै कोरोनाको एन्टिबडी !
गोकर्णेश्वर खबर१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १६:२१ मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) ७० पाठक संख्या
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको उद्गम थलो मानिएको चीनको वुहानबाट फेरि एक पटक संसारकै चिन्ता बढाउने समाचार सार्वजनिक भएको छ । नयाँ अध्ययनमा वुहानका ४ प्रतिशत भन्दा कम व्यक्तिमा मात्रै कोरोना भाइरसको एन्टिबडी फेला परेको छ । यसको अर्थ यसअघि कोरोना संक्रमण भएका हरेक १ सय जनामा ९६ जनामा कोरोनाको एन्टिबडी सकिएको छ । जसलाई अब फेरि कोरोना संक्रमण हुनसक्ने अध्ययनको ठहर छ ।
वुहानमा अघिल्लो वर्षको डिसेम्बरमा कोरोना संक्रमण पाइएको थियो । त्यसैले वुहानलाई कोरोनाको इपिसेन्टर भन्ने गरिन्छ । तर, कोरोना संक्रमणका हिसाबले चीन धेरैपछि छ । अमेरिका, भारत, ब्राजिल लगायतका देश कोरोना संक्रमणका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् ।
जामा नेटवर्क ओपनमा प्रकाशित अध्इयनमा वुहानका धेरै व्यक्तिमा कोरोनाविरुद्धको इम्युनिटी छैन । संक्रमितमध्ये पनि धेरैमा कोरोनाविरुद्धको इम्युनिटी नरहेको पाइएको छ । यसअघि धेरैमा कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्ने र त्यसैका आधारमा एन्टिबडी बिकास भएको अनुमान गरिएको थियो ।
चीनको वुहानस्थित तोङ्जी अस्पतालसँगको सहकार्यमा गरिएको अनुसन्धान २७ मार्चदेखि २६ मेसम्म भएको थियो । अध्ययनमा ३५ हजार भन्दा धेरै व्यक्तिको एन्टिबडी परीक्षण गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा जम्मा ३.९ प्रतिशत व्यक्तिमा मात्रै एन्टिबडी पाइएको थियो ।
वुहान चीनको हुबेइ प्रान्तको राजधानी हो । यहाँ ६८ हजार भन्दा धेरै व्यक्ति कोरोनाको चपेटामा परेका थिए । एक्कासी हजारौँ व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएपछि यहाँ अस्थायी अस्पताल नै बनाएर उपचार गरिएको थियो । चीनले कडा स्वास्थ्य मापदण्डका कारण नियन्त्रणमा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
म्यारोडोनाको निधनमा अर्जेन्टिनामा तीन दिन राष्ट्रिय शोक
आज मध्यरातिदेखि ६ दिने लकडाउनको घोषणा
राष्ट्रपतिमा हारेपछि ट्रम्पसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै पत्नी मेलानिया !
अर्को विश्व युद्धको खतरा: बेलायत रक्षा विभाग प्रमुख कार्टर
ट्रम्पलाई हराउँदै वाइडेन बने अमेरिकाको राष्ट्रपति
अमेरिकी निर्वाचन : ट्रम्पलाई पछि पार्दै जर्जियामा बाइडनको अग्रता
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन ९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
छ जना गर्भवती महिलाहरु लिएर साथीको बिहेमा पुगे यी युवक
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०७:४०
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०७:१३
नेकपा विवाद चर्किँदै, टुट्यो ओली र प्रचण्डको संवाद
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०७:०१
गायक तथा मोडेल सुदिप हमालको ” पहिलो नजर” गीतको म्युजिक भिडीयो सार्वजनिक
११ मंसिर २०७७, बिहीबार १९:००
कोरोना अपडेट : नेपालमा थप १,६१४ जनामा संक्रमण, २३ जनाको मृत्यु
११ मंसिर २०७७, बिहीबार १६:३७
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०६:१०
जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षहरुको निश्कर्ष : इमान्दारलाई मौका, बेइमानलाई कारवाही
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०६:०५
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०५:५६
१० मंसिर २०७७, बुधबार २२:५३
हाम्रो सुनौलो संसार बाल आश्रम भवनको आज शिलान्यास
१० मंसिर २०७७, बुधबार २२:३३
लायन्स क्लब अफ काठमाडौं लिडरसिप फर चेन्ज द्वारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
१० मंसिर २०७७, बुधबार २०:०८
कोरोना प्रभावितलाई कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
१० मंसिर २०७७, बुधबार ०७:२४
आज २०७७ मंसिर १० गते बुधबारको राशिफल
१० मंसिर २०७७, बुधबार ०७:०४
विश्वमा एकैदिन ५ लाख ३४ हजारबढी संक्रमित थपिए
१० मंसिर २०७७, बुधबार ०७:०२
समाजसेवी याङ योञ्जान लामाको सहयोगमा बेशीगाउँमा बस्दै आएका असहाय वृद्धको अन्तिमसंस्कार
९ मंसिर २०७७, मंगलवार २१:४१
१३,६१२ कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा : स्वास्थ्य मन्त्रालय
बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न अध्यादेश
निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनलका लागि टेन्डरको तयारी हुँदै
तिहारपछि पनि रोकिएन खुलामञ्चमा खाना खुवाउने अभियान
प्रधानसेनापति थापा र भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेबीच भेटवार्ता